श्रद्धाञ्जलीका लागि नेता अधिकारीको पार्थिव शरीर नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा « Postpati – News For All
श्रद्धाञ्जलीका लागि नेता अधिकारीको पार्थिव शरीर नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा
फागुन १९, काठमाडौं । शनिबार राति निधन भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको पार्थिव शरीर अहिले काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको छ ।
अधिकारीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न बिभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताहरुको घुइँचो लागेको छ । श्रद्धाञ्जलिका लागि नेता अधिकारीको पार्थिव शरीर बिहान साढे ८ बजे पार्टी मुख्यालयमा ल्याइएको हो । अहिले नेता अधिकारीका आफन्तहरूले श्रद्धाञ्जलि दिने क्रम चलिरहेको र ९ बजेदेखि पार्टीगत श्रद्धाञ्जलिको कार्यक्रम सुरु हुने बताइएको छ ।
श्रद्धाञ्जलिका लागि नेता अधिकारीको पार्थिव शरीर मध्याह्न १२ बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा राखिने र त्यसपछि पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्त्येष्टि गरिने नेकापाले जनाएको छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अधिकारीलाई दिने श्रद्धाञ्जलीको विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने छ । त्यसका लागि बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाइएको छ ।
फोक्सो र मुटुको समस्याबाट पीडित ८३ वर्षिय अधिकारीको उपचारका क्रममा शनिबार राति ९ बजेर ३५ मिनेटमा निधन भएको ह्याम्स अस्पतालको क्रिटिकल केयर सर्भिसेजका संयोजक डा. हेमराज पनेरु र मेडिकल डाइरेक्टर डा. भाष्कर राज पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।